MADATREK : Mahajanga no namaranan’ny fianakaviana Poussin ny fihodinana an’i Madagasikara
Ny zoma teo no noraisin’ny tanànan’i Mahajanga tamin’ny fomba ofisialy ny fianakaviana Poussin. 6 août 2018
Ny ben’ny tanàna sy ny ekipany, ny ofisim-paritry ny fizahantany ary ny mponina eto Mahajanga maromaro no efa niandry azy efa-mianaka teny. Alexandre, Sonia, Philaé ary Ulysse no tonga teny niaraka tamin’ireo mpitari-dalana roa dia i Jerome avy any Mananara avaratra sy Revel avy any Morondava ary ireo biby fiompy tsy misaraka amin’izy ireo. Fihodinana im-pito ny baobab no namaranan’izy ireo ny 4866km manodidina an’ i Gasikara.
Ny 16 septambra 2014 izy ireo no niainga tao Antananarivo nihazo an’i Morondava. Avy eo dia nanaraka ny sisiny nihazo an’i Toliary Fort dauphin.... Niakatra an’i Vangaindrano Farafangana, Manakara Mananjary... Teo no nandray lakana nankany Mananara ary avy eo indray Toamasina, Maroantsetra, Antalaha... Diego, Ambanja. Nosy-be Antsohihy ary Mahajanga.
Mialoha ny nahatongavany teto Mahajanga dia nitsidika ny lavabaton’Anjohibe izy ireo... Teo amin’ny sampanana Marerano no natorian’ izy ireo alina farany mialoha ny nidirany an’i Mahajanga. Nigar Barday no nandray azy ireo tao amin’ny valan-javaboary Reniala ny alakamisy, ary noraisina tamin’ny fomba ofisialy ny zoma tolakandro teo teto Maha janga.
Miala amin’ny mahazatra ary tantaram-pitiavana manokana an’i Madagasikara ny an’ireto fianakaviana kely ireto. 5 taona i Ulysse no nanomboka nandeha teto Madagasikara nanaraka ny dian’ireo ombin-tsarety. Sivy taona izy izao. Mijanona ho fahatsiarovana lehibe ho azy i Madagasikara sy ny mponina ao aminy. Ny renin’izy ireo Sonia no nampianatra azy mianadahy nandritra ireo efa-taona ireo....
Amin’ ny fidiran’ny mpianatra izao dia hiditra kilasy 6ème i Ulysse ary 4ème I Philaé. Maka sary ny diany moa ny fianakaviana Poussin ary mandeha amin’ny fahitalavitra voyages izany hampahafantarina an’i Madagasikara. Na isika Malagasy aza dia vitsy ny nahita ny hitan’izy ireo teto Madagasikara, hoy ny ben’ny tanànan’i Mahajanga Andriantomanga Mokhtar nandritry ny lahateniny. Nambarany ihany koa fa nomeny azy efa-mianaka ireto ny fanalahidin’ny tanànan’i Mahajanga ary mirary ny hiverenan’izy ireo eto an-toerana izy. Nanambara moa Alexandre Poussin fa omeny ny fahitalavitra Tvm sy Viva ireo horonantsary rehetra nataony teto Mada gasikara mba hahitan’ny vahoaka Malagasy izany ihany koa. Mbola mijanona eto moa izy ireo mialoha ny hiakarany any Antananarivo sy hitodihany hody any an-tanindrazany.
2018-08-06 10:12:34 par Tahiana
Tena midera an ireto fianakaviana ireto aho fa tena nahavita
mijery fandaharana @ tele Canal hafa aho ,manraka andry zareo rreto fa tena henjana ka ,tena chapeau,tena niaritra @ rehatra na hatsiaka na orana na hafanana,sns e ! fa maninona isika Malagasy tsy mba mahavita azy toy ry zareo,tena aventure be
izao vo mahalala hoe efa @2014 ka hatr@zao hay ry zareo reto no nandeha foana ,heveriko hoe tantara efa vita hay mitohy foana di izao vo vita
2018-08-10 14:44:20 par GASYLAH
Zavatra mpikarama an’adin’ny Lafrantsa les reo a ! aiz ko no mis ol handany volabe manodidina an’i mada ra ts hitsikilo ny harenan’ny firenena ?! asa alou !! f izany no nanjanahany ny tanintsika taloha e !!
Tratra niaraka tamin’ny basy sy odigasy i Alain, jiolahy raindahiny ANKAZOBE (660) 21 janvier 2021 Mila vola hatrany amin’ny 75,9 tapitrisa dolara KERE SY HAINTANY ANY ATSIMO (356) 19 janvier 2021 Nakorain’ireo mpijery ny Ben’ny tanànan’Antsiranana FANDRAVANA LALAO (158) 19 janvier 2021 Trano 50 tafo mahery kilan’ny afo HAIN-TRANO GOAVANA TENY ANOSIBE ANDREFANA (89) 19 janvier 2021 Namaly ny hetahetan’ireo voafonja ao Antsiranana DEPIOTE JOCELYNE MAXIME (76) 19 janvier 2021 Lehilahy 04 mpihaza sokatra an-dranomasina tratra NOSY ANTANIFALY - ANALALAVA (72) 19 janvier 2021